पोखराको मौसम आज पनि सुध्रिएन, देशभर कस्तो छ ? – Gandaki Voice
Home/देश/पोखराको मौसम आज पनि सुध्रिएन, देशभर कस्तो छ ?
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराको मौसम आजसम्म सुध्रिएको छैन । बिहान ९ बजे यो समाचार तयार गर्दै गर्दासम्म पोखरा अँध्यारो छ । आसपासका ठाँडाहरुमा बाक्लो हस्सु लागेको छ । मंगलबारदेखि बिग्रिएको मौसम आज पनि उस्तै रहने देखिन्छ । योसंगै पोखरामा कडा चिसो महसूस भएको छ ।
मौसम विभागका अनुसार हाल देशमा कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली रहेको छैन । देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने तराई भूभागमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ । गण्डकी प्रदेशका केही भूभागमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ ।
देशको विभिन्न भूभागमा तापक्रममा हल्का गिरावट आउनुको साथै तराईका धेरै भूभागहरुमा बिहानको समयमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरोसमेत लाग्ने सम्भावना रहेकोले चिसोबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
बुधबार गण्डकी प्रदेश, प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती प्रदेश, र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागहरुमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । यस्तै गण्डकी प्रदेश र प्रदेश १ को एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
बिहीबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ । गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं १ का एक/ दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका अन्य भूभागहरुमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ ।
शुक्रबार सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश १ का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ । देशका अन्य भूभागहरुमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च हिमाली भूभागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको छ ।